अन्तरजातीय विवाहले विस्थापित भएका जोडीको प्रश्न : प्रेम गर्नु पाप हो र ? - Himalaya Post
अन्तरजातीय विवाहले विस्थापित भएका जोडीको प्रश्न : प्रेम गर्नु पाप हो र ?
Posted by Himalaya Post | २६ असार २०७६, बिहीबार १४:४३ |
जाजरकोट – अन्तरजातीय विवाह गरेका जुनीचाँदे गाँउपालिका–५ गर्खाकोटका गणेशकुमार चदारा र सोही ठाउँकी ज्योति शाह चार वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् ।
प्रहरीले गणेशका बुबालाई पक्राउ गर्यो । छोरालाई खोजेर ल्याउँछु भनेपछि प्रहरीले कमारालाई छोडिदियो । उनले छोराबुहारीलाई जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा बोलाए । गणेश धनगढीबाट खलङ्गा आए । सुरक्षाका कारण देखाउँदै गर्खाकोट जान नसक्ने बताएपछि प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै बयान लियो । दुवै पक्षको बयानका आधारमा ज्योतिका बुबा उत्तम शाहले चोरी गरेको भनी दर्ता गराएको मुद्दा झुटा ठहर भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रहरीले पनि उमेर पुगेका केटाकेटीको मनचित्त लागेर बिहे गरे अरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न आग्रह गर्यो, तर माइतीपक्षकाले मिलापत्र गर्न मानेनन् फर्केर गए । गाउँ गए उनीहरुको सम्बन्धविच्छेद गराउने र जतिखेर पनि आक्रमण हुनसक्ने डरले आफूहरु गाउँ जान नसकेको गणेशले बताए। गाउँकै शिवपुरी माध्यामिक विद्यालयमा दुवै अध्ययन गर्थे । ११ कक्षा दुवै पास भयौँ तर, १२ कक्षाको परीक्षा दिन पाएनौँ गणेशले भने “१२ कक्षाको परीक्षा आवेदन फारम भरे पनि माइतीपक्षको धम्कीका कारण परीक्षा दिन पाएनौँ।” गाउँमै रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत उनीहरु माइतीपक्षको धम्कीका कारण दुईपटक परीक्षा छुटाइसकेका छन् । विद्यालयले स्थानान्तरणसमेत नगरिदिएपछि उच्च शिक्षा पढ्ने धोको पूरा हुननसकेको उनले गुनासो गरे । सदरमुकाममा खान बस्न समस्या भएपछि गणेशले ज्याला मजदुरी गर्छन् भने ज्योतिले सदरमुकाममै सानो घुम्तीमा खुद्रा पसल राखेकी छन् । “जेनतेन गुजरा चलेको छ”, गणेशले भने, “गाउँमा जान पाएको भए खेतीकिसानी गरेर जहान केटाकेटी पाल्थे अहिले म साह्रै समस्यामा छु ।” यस अवधिमा उनीहरुका दुई छोरीको जन्मसमेत भइसकेको छ । तर अझै पनि माइतीपक्षको मन पग्लिएको छैन ।
“अरु हामीलाई मतलव छैन । हाम्रो छोरी मरीसकी । तिनीहरु फर्केर हाम्रो गाउँमा नआउन, आए राम्रो हुँदैन भन्छन् रे बाबामम्मीले मैले के बिगारेकी छु र ? प्रेम गर्नु पाप हो र ?” ज्योतिले भनिन्, “अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जातभातको कुरा गरेर मलाई सामाजिक बहिष्कार गरे । म के गरुँ ।” रासस
Previousगौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम पुनः सुचारु गर्ने फाउण्डेसनको निर्णय
Nextललितपुरमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दो
धादिङ प्रतिनिधिसभा-२ मा लोहनी विजयी घोषीत
२३ मंसिर २०७४, शनिबार ०८:०७
नक्सापासबिनै सेनाले बनायो महलहरू: महानगर कर्मचारीले गरे गुनासो
४ माघ २०७४, बिहीबार ०९:०५
७ आश्विन २०७५, आईतवार १२:३७
सर्वसाधारणको माग, ‘पुरानै शैलीमा रानी पोखरी निर्माण गरिनुपर्छ’
२४ पुष २०७४, सोमबार १७:५०